1X4 40W Led Troffer Fixtures Retrofit Kit China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo Akwụghachi Azụ Na-echekwa,Ihe nkedo na-agbasi mbọ ike,1X4 Panel Panel
Home > Ngwaahịa > Enwusi Ìhè > 1x4 Na-enwusi Ìhè > 1X4 40W Led Troffer Fixtures Retrofit Kit
Ihe Nlereanya.: BB-RTGD-40W-A-14-D
Belata ikike ị na-eji eletrik eme ihe na Ngwá Ọrụ Ngwá Agha Led Troffer Retrofit Kit nke ahụ na-eji 40W ike, na-egbutu oke ego gị ụgwọ eletrik kwa ọnwa! Agbanwe na-enweghị ntụpọ na ntụpọ ọkụ ọkụ 4FT gị dị mma. Onye ọ bụla Ogologo ihe ngbochi nke a na- eme ka njedebe nke nsụgharị ọkụ na-emepụta iji nweta ezigbo ọkụ ọkụ na 5200 lumens, nhata 130 lm / W nke arụmọrụ elu. Na-achịkwa mkpa ọkụ gị na ike ị belata site na 100% na 10% mmepụta ọkụ na otu 1M4 Panel Nchekwa zuru ezu zuru ezu . .
A dị mfe ma dị mfe C eiling Troffer nke a ga-arụnye n'ime ụlọ elu gị, tinye ya na ihe mkpuchi elu, ma ọ bụ na-esi n'elu ụlọ kwụpụ ya. Ezigbo maka ụlọ obibi, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla nke chọrọ ka a ukwuu oru oma L ed Recessed Troffer .
Na-achịkwa mkpa ọkụ gị na ike iji belata site na 100% ruo 10% mmepụta ọkụ na ngwunye kpamkpam L ed Lay na ihe mgbochi . Mee ka ọkụ gị dị ka ọnọdụ gị si dị ma nwee obi ụtọ na ọnọdụ obi ụtọ, oge ọ bụla. 40W, 5000K (Ìhè Na-acha ọcha), 5200 Lumens, 1X4 R chọrọ Mkpa , Dimmable 0-10V, 120 Celsius, 50,000 Hour Life, 5-YEAR Enyemaka.
Ngwaahịa : Enwusi Ìhè > 1x4 Na-enwusi Ìhè
1X4 40W Led Troffer Fixtures Retrofit Kit Kpọtụrụ ugbu a
1x4 25W Ebube na-eme ka ihe nkwụnyeghachi Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo Akwụghachi Azụ Na-echekwa Ihe nkedo na-agbasi mbọ ike 1X4 Panel Panel